Maraykanku yuu wax siyaa sideese wax u siiyaa? - Caasimada Online
Home Dunida Maraykanku yuu wax siyaa sideese wax u siiyaa?
Maraykanku yuu wax siyaa sideese wax u siiyaa?
Dhowr bari ka hor ayuu Maraykunku ku hanjabay inuu cayrta ka jari doono waddanki ka codeeyo. Bootadi ma shaqayn oo adduunka intiisa badan oo dalkeennu ku jiro waa ka codeeyay. Ilaa shalay dhowr qof oo aan isku soo qaadnay arrintaas ayaa walaac ka muujiyay in Maraykanku biilka ka jaro dowladda. Balse su’aashu waxa ay tahay marki hore wax ma siin jiray? Waxaan isku dayay inaan wax ka ogaado inay jirto cid ku nool cayrta Maraynka, waxaana la kulmay warbixin ay daabacday Aljazeera sadex cisho ka hor iyadii ayaana halkaan idin kula wadaagayaa.
Sanadki 2015ki waxa uu Maraykanku sadaqo u bixiyay adduun gaarayo $58.6 bilyan taasoo u dhiganto 1.3% miisaaniyadda dalkaas. 43% adduunka uu bixiyay Maraykanku waxay ku baxday borogaaramyada horumarinta dhaqaalaha ah ee labo geesood ah (bileral economic developmet programmes). 35% waxay ku baxday caawin xagga amniga iyo militiriga ah, 16% waxaa lagu sheegay gargaar bini aadamnimo, 6% waxay la marsiiyay hayadaha dalalka badan ka dhexeeyo (multilateral institution). Xoolahaas ay bixin jireen, Taraam waxaa uu jarayaa 28% laga billaabo sanadka danbe. Sidaa darteed, sanadka cusub waxaa uu xaqiijiyay inuu bixinayo $25.8 bilyan sidaan ayuuna ugu qaybin doonaa caruurtiisa bariga dhexe.
Yuhuudda waxaa uu siin doonaa $3.1 bilyan waana dalka helo cawimaadda ugu badan. Dhammaan deeqdaan waa mid militiri caddaanna kuma jiro. Dhammaan qalabka militiri ee uu siinayo waxaa laga iibinayaa shirkadaha Maraykanka, ama waxay noqon tababarro ay bixiyaan saraakiil Maraykan ah. Labada dhinacba isaga unbaa qaadanayo waxaa u bixinayo.
Waxaa kusoo xigo Masar iyo Urdun oo kala helayo $1.3 bilyan iyo $1 bilyan. Iyaguna waxay helaan waxay la mid yihiin waxa Yuhuudu helayso. Waxaa iyaga lidkooda ah xigta uu siiyo Falastiiniyiinta taas oo dhan $251 milyan, dhammaanteedna waa cunno iyo qashin kale. Iyaga hub iyo tababar toona looma ogala.
Waddamadaan waxaa soo raaca kuwaan: Lubnaan $104 milyan, Yemen $35, milyan, Ciraaq $348 milyan, Suuriya $191 milyan, Tuunisiya $55 milyan, Morooko $16 milyan, Liibiya $31 milyan, Cummaan $3.5 milyan, Aljeeriya $1.8 milyan iyo Baxrayn oo hesho $800000.
Dhammaan waddamadaan waa kuwo uu isaga burburiyay oo uu baahida ku jarrabay sida Ciraaq iyo Liibiya ama waa qaar uu dusha ka ilaashado oo qashinka ugu qubo inaysan ka fogaan sida Masar. Waxa uu siiyo waxaa ku tiirsan shirkado Maraykan ah sidaas darteed waxay dantu ugu jirto maahan kuwa la siiyo ee waa isaga. Masar waxaa la siiyaa sanad walba heelokobtarro cusub, kuwii hore oo loo la’layahay meel la dhigo sidaas darteed waxaa lagu xareeyaa baqaaro ay ugu danbayn ku bas beelaan.
Dalkeena ma jiraan wax u go’aan oo uu siiyo laakiin waaxda horumarinta adduunka u qaabilsan (USAID) ayaa mashaariic yaryar oo ku go’ ah soo marsiiso hayado kale. Mashaariicdi ugu horraysay ee ay si toos ah ula gasho Soomaaliya tan markii ay dhacday dowladdii dhexe, waa tan bishaan ay la saxiixdeen dowladdaan iyaduna kuma jirto wax ay caddaan u bixin doonaan ama ay miisaaniyadda dalka ku kabayaan.
Ugu danbayn waddamada codeeyay waa ogaayeen waxa uu bixiyo iyo cidda ay dantu ugu jirto sidaas awgeedna hanjabaaddiisi cidna dhag jalaq uma siin.
Halkaan akhri waxbixinti Aljazeera: http://www.aljazeera.com/news/2017/12/trump-threat-cut-aid-deterrent-hot-air-171221152217078.html.